Jawaari oo u digay xildhibaanada aada safarada aanan laga war heyn – XAMAR POST
Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari) ayaa xildhibaanada Baarlamaanka uga digay inay aadaan safarada aysan ka war qabin Guddoonka uu ka tirsan yahay.
Jawaari ayaa xildhibaanada ka dalbaday marka ay shaqo Dibadda ah u soo baxdo in ay maraan Guddoonka ay ka tirsan yihiin, si looga warqabo oo shaqada Baarlamaanka aysan dhibaato ku noqon.
“Xildhibaan bixi karo ma jiro isaga oo aanan Guddoonka uu ka tirsan yahay ka fasax qaadan, ha yiraahdo howshaas ayaan u socdaa, si looga warqabo, hada boqol iyo xoogaa ayaa maqan, oo aanan ka warqabin annaga.” Ayuu yiri Guddoomiye Jawaari.
Guddoomiye (Jawaari) ayaa xildhibaanda xusuusiyay shaqadooda, wuxuuna tilmaamay in ay ka turjumayaan shacabka oo ay saaran tahay masuuliyad, sidaasi awgeedna aanan loo baahneyn in ay danahooda gaarka ah fiirsadaan.
Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari) Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa hadalkan ka sheegay kulankii Baarlamaanka ee maanta ka dhacay xarunta Golaha Shacabka magaalada Muqdisho.
Xildhibaanada Golaha Shacabka oo u yeeray Wasiiro ka tirsan Xukumadda Soomaaliya.